Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuvata noMusikana/Mukomana webasa
Musikana/Mukomana webasa pamusha
Nyaya dzevashandi dzagara dzinonetsa. Chokutanga tinofanira kuhwisisa kuti se vanhu vane mhuri yavo vachizoda kunotsvaka munhu wavasinei naye kuti azovashandira pamusha pavo achigarapo, zvinenge zvamboita sei. Nyaya iyi inobva kure uye zvikonzero zvayo zvasiyana nezvazvange zviri kare. Tichitarisa kare tinoona kuti vanhu vaiti kana murume akawana basa rakanaka, vakanogara kunzvimbo ine dzimba dzinodhura. Vadaro vaizowana kwese kunzvimbo iyoyo kune dzimba dzine vashandi, ivo vofunga kuti zvakakodzera kuti vaitewo mushandi kuti vasaonekwa vachiita mabasa anoitwa nevashandi mune dzimwe dzimba. Waizoona imba ine mwana umwe chete, mai vake havashandi, chikoro Havana kupinda, pamba hapana project yavanoita, woona vane mushandi anoita basa rokusuka ndiro, nokuwacha, nokuenda kumagirosa sezvinoita vari mune dzimwe dzimba.
Pamba paya paiswa musikana webasa paizoonekwa kuti hapana munhu wekugadzira zigadheni riya ratengwa neimba yaro. Taizoona kuti baba vaya vaingopedzisira vatsvaka mukomana wegadheni mari yacho isingakwani nokuti pane munhu umwe anoshanda.
Waizoona murume uya nemhuri yake, mari yekubhadhara imba yaperera pavashandi onotora huku dzemafidha kuti awane kamwe kamari. Mukadzi uya wokusadzidza kufidha huku otadza kukuhwisisa, huku dziya vopedzisira vodya varidzi vadzo, Profit hapana. Zvovanetsa mhuri yese vasingahwisisi kuti mari iri kuperera pavashandi vasina zvavanounza pamusha.
Pakadai murume aizogaroshanda ma Overtime kubasa, osvika kumba asina simba rokugutsa mukadzi. Mukadzi otanga kufoya murume nokumufungira kuti ari kuhura . Nyaya yoti uku ari kuswera pamba nemukomana akagwinya, uku iye haasi kuguta, uku murume haana nguva naye nokuda kuriritira mhuri. Kusadzidza kuya kotanga kukonzera kufunganya uye kutarisa zvidya zvemukomana wekupfeka chikabudura achidiridza muriwo.
Murume akaroora mukadzi asina kudzidza achifunga kuti ndiye achazovimbika nokuti anotenda kuti akurudzigwa asi obva amusiya nomukomana wezera rake uye we SOCIAL STATUS yake. Vaviri ava vakatanga kutaurirana vanohwisisana. Kuti vaswera vese umwe ane zemo rave namazuva matatu handizvo. Vanopedzisira vaisana chete. Iye saimba ndiye ane mhozva nokuti anosiya vanhu ava pamba vasina zvimwe zvavari kuita.
Takazosvikawo pane imwe nguva yokuti vakadzi vairoogwa vanga vati dzidzeiwo vachihwisisa zviitiko zvemunyika. Apa ndipo patazoona kuti munhu uya ainzi mushandi pamba ange ava munhu akadzidzawo zvokuti aiziva zvaari kuda. Anouya kutaundhi achitanga kunoshanda kumayadhi, opedzisira opinzwa chikoro kupedzisa FORM 4 ari pabasa iri achiwana mari uku achibhadhara chikoro nokushandisa chiuno kuna baba/mai vemba.
Mazuvano tinoona kuti kuma 2000-2009 nyaya yemaSmall House yakaita EXPLOSION munyika yedu nenyaya yokushaikwa kwemabasa. Vasikana vaida mabasa vakawanda. Mabasa kwange kusina, vasikana vakadzidza chose. Zvange zvaitikawo kuti kune vakadzi vakawanda vakavambuka vachisiya varume vanoshanda pamusha pane vana vanoda muchengeti. Potsvakwa musikana webasa anochengeta vana achivatapo mai vevana pasina. Baba vevana Havana wekuvata naye. Zvakaitika panguva iyi zvakawandisa uye vanhukadzi vakazobuda munguva iyi vave mvana vakawandisa.
Koitazve vakomana vakawana mabasa padzimba nokuda kwemari yaishandwa nevarume vevanhu kuzhe kwenyika vachitumira mhuri kuti mhuri ifambire mberi. Saka pamba paingoita vashandi vaviri namai vemba.
Panguvawo dzese idzi takaona kuti vanhu zvevashandi vanozvida chero pasina chinhu chinodiwa kuitwa nomushandi wacho. Vashandiwo vanhu vanoti ashaya zvimwe zvokuita anonoshanda pabasa raasingadi kuti zvifambe. Vamwe vavo vange vari vanhu vakadzidza kusvika pa Form 4 kana kupfuura saka waitoona kuti muchibva pachikoro muri vaviri, umwe woenda kunoita ticha umwe woenda kunoshanda pamba yomunhu pamba panomubereki umwe chete nevana. Pamwe hapana vana.
Nyaya yese iyi yainetsazve kuti nyika yese pamwe inoita sokuti inyika ine hondo saka vanhu vari kutsvaka zvinhu zve SHORT TERM chete. Kukorokoza, kuba, kuhura, kutsvaka kabasa kokuita nhasi chete, zvichidaro.
Saka vashandi vemudzimba vakawedzeresa kuhura kwevanridzi vedzimba idzi vakawandisa. Vasikana vakaita mimba vakawanda, vakavatwa navo zvisina mimba vakawanda. Vakomanawo vakavata namai vemba vakawanda. Dzimwe mimba dzakaitikawo ndedzavo. Chinonetsa mukadzi wemunhu pamusha ndechokuti hazviiti kuti anzi ari pa CONTRACEPTION muriume asingazivi asi kana ashandisa kondhomu nomukomana webasa. Anokwanisazve kundobaiwa DEPO asi hunge atoenda kure nekwaanogara kuti zvisazobuda.
Kuvata nomusikana webasa:
Musikana webasa anoonekwa sokuti mukadzi wemurume uyu nokuti ndiye anowacha zvipfekwa zvake nokuzviaina. Anochinja mashitsi pamubhedha wemurume uyu. Anosona zvabvaruka, anomubikira zvese zvaanodya, anomugadzirira zvokudya zvokubasa norudo sezvinongoita mai vemba. Ipapo mai vemba vakagara vachiona TV. Varume vedu vechivanhu kufunga kwavo kwakasiyana nekwemamwe marudzi. Kana pamba paita mukadzi murume akawana mukana anomukwira chete ozorambwa hake akwira. Uyavo nyakukwigwa kazhinji haawani simba rokuramba nokuti munhu anoda kumukwira ndiye munhu anomubhadhara pamwedzi. Simba rake ishoma pakuramba nokuti akadzingwa basa haana kwekuenda. Akatokwigwa anopedzisira awedzegwa mari, nokutengegwa nhumbi.
Kana mushandi ari munhu mukuru toti makore anopfuura 25, uye ane mwana kana kuti akambogarawo nomurume, akazofigwa kana kurambwa, anenge achitodawo kupiwa nokuratidzwa rudo. Kuiswa chinhu cherudo saka moyo unozarawo mufaro ne EXCITEMENT nazvo. Kuzobudazve mu SPOCIAL CIRCLE yake zvinopa manyawi. Wotoona murume otovata naye zvoita sokuti vatova neSECERET yavo. Vaya mai vemba vosara vati vavava sehuku yanaiwa nechimvuramabwe. Murume anotovata nomusikana webasa pamubhedha weMain Bedroom panovata muridzi wemba. Vanhu kwanai.
Kana wada musikana webasa tsvaka munhu mukuru anohwisisa mafambire emusha uye anoremekedzwa nomurume wako. Kuvata nomusikana webasa kunobva pakumhura munhu anokushandira, kutanga kutarisa muviri wake nokuziva kuti haakwanisi kuramba.
Kuvata nomukomana webasa.
Vakomana vebasa kazhinji vanoshanda pazhe zvokuti havawanzi kusangana namai vemba. Vakadzi kana vambojaira kuvata nomurume akazoshaya asi zuva nezuva achionawo murume waanziva kuti akasvika anokwanisawo kuti umwe musi zemo rakakwira ukumbira mukomana webasa kuti auye mumba. Vana vari kuchikoro, murume ari Joni kana kumwe, paitawo mwedzi miviri asi wambopurudzirawo kana garo haro. Zuva rapisa kuwedzera zemo. Anoti mokomana uya umwe mazowe, vomboita nyaya.
Mukomana webasa kubvisigwa bhurugwa namai vemba zvoita sokuti munhu akwirira chose. Akazoonekwa kuti basa anogona kupfuura baba vemba zvatoshata pamusha apa. Ukaverenga tsamba dzinonyogwa nevakambozviita unohwisisa kuti chinhu chakanaka chose kudzidza zvinodiwa nomukadzi wawakaroora. Asi mukomana webasa anongokwanisawo kuva munhu anochivika kutarira. Kubva pakugwinya muviri nenyaya yokutimba gadheni uye kuva munhu anofema mweya uri FRESH.
Zvikuru kana mai vemba vasingashandi vachingoswera pamba nomukomana webasa, zvana zvaenda kuchikoro. Zemo harina shasha. Uripo akambonyora kuti ange asinei nazvo kusvika atarisa nepawindho ndokuona mukomana achidiridza muriwo achiridza zvake muridzo, ndokumudana kuzomubvunza kuti ane musikana here, ndipo pakatangira nyaya mukomana ati haana kumbovata nomunhukadzi zvikahi unoda kudzidza here.
Asi hazvina kusiyana nomurume anovata nomusikana webasa. Mai ava vakaita mimba vanongopomera murume wavo. Varume havagoni kupomera mukadzi kana musikana webasa aita mimba.
Hwisisazve kuti mukomana webasa uyu haagari achirhoja nokuti haana mukadzi. Saka akapiwa chanzi namai vemba urume hwake hunenge hwakatokora chose zvokuti kana zai riri pedo vanoita mimba naye nokukasira. Hwisisazve kuti RESEARCH inoti vanhukadzi vanowedzera zemo chose panguva yokukandira zai saka ndiyo nguva yavanowedzerawo kuhura kana vachigarohura. Zemo rine simba kupfuura fungwa pavanu vakawanda, zvokuti unozotanga kudembademba watopedza kuiswa, ipapo kondhomu hapana saka zuva rinozovira urume hwava muchibereko kunosangana nezai, mwana wototaka kuumbwa, ipapo murume ari Joni kubasa. Ndipo unoona mukadzi okwira bhazi kuenda kumurume kuti ambowana mukana wekuvata naye kuti agoti mwana ndewemurume.
Kunongozotiwo chimwana chazvagwa woona chine mumhu wakasiyana nezvimwe zvana, asi kuti ubvunze kuti zvakafamba sei nhai mai chimwana, haubvunzi nokuti fungwa yako haidi kufunga kuti mukadzi wako akambovata nemukomana webasa aimbova pano.
Hino mazuvana kwava ne DNA TEST saka chenjerai vana mai vemba kuti kuvanza chihure chinoitisa mimba hazvichaiti.
Kozotiwa uya mukomana webasa wawaravidza zvinhu musi waanogogodza paBEDROOM yako murume wako asipo achikukumbira kuvata newe hauzokwanisi kuramba nokuda kwekuziva EXCITEMENT yaakakutaridza nokukupa musi wekutanga, yauchisapiwi nomurume wako.
Kune vanhu vakawanda vakambovata nomushandi vamwe vakapedzisira vatoroorana naye mukadzi/murume ashaika kuna kurambwa. Nyaya inoitika pachihure ndeyokuti nyakuhura anenge achitoziva kuti zvaari kuita zvakaipa asi kuti arege, zvomunetsa. Mufungwa make anozvipa chokonzero chokuhura kwake kuti aone sokuti hazvina kunyanyoipa sezvinotaugwa navamwe.
Vanhu vanohura nevanhu vavanoziva kuti havakwanisi kuramba vanhu vanofarira ABUSE yevamwe vanhu. Ukaona saimba oda kubvisa musikana webasa bhurugwa, ingari yokuti anoziva kuti musikana webasa anohwisisa kuti akaramba basa rapera. Ipapa ndipo panobva ABUSE. Munhu asingakwanisi kuzvisarudzira zvaanoda ari kubatwa chibharo. Musikana webasa pakadai haana simba rokuudza saimba kuti vapfeke kondhomu. Anokwanisa kungoiswa pasina ambomufungirawo kuti angangoita mimba. Akaita mimba anodzingwazve basa saka nyaya yake yatova pakaoma. Panofanira kuva nomutemo unorambidza zvakadai kuitika.
Mai vemba vanonotora mukomana webasa vouya naye pamubhedha wemuchato, kana kuenda kumubhedha wake, vanenge vahwisisa kuti iye anoziva kuti akaramba anodzingwa basa. Izvi zvinoreva kuti munhu asina chaanokwanisa kuita panyaya yacho. Mazuvano inonzi ABUSE. Kuvata nomunhu asina simba rokubvuma kana kuramba zvakangofanana nokumubata chibharo. Mukomana uyu kana kutaurira vamwe kuti akavata namai vemba haakwanisi nokuti zvikazikamwa kuti audza shamwari, anokwanisa kusungiswa kuti akarhepa mukadzi uyu, kana kudzingwa basa. Kubatwa chibharo hakunakidzi.
Kana murume/mukadzi asipo kwenguva yakareba, ukafunga zvokuvata nomushandi ukanomutora muimba yake yokugara ukamubvisisa bhurugwa nokuvata naye, wamuisa pakaoma. Ukaita mimba uchaibvisa ugouraya mwana wake. Ukamuitisa mimba uchamudzinga basa agobva ane mwana waasingakwanisi kuriritira. Hazvina kusiyana nomunhu anoona musikana achizvifambirawo hake kuenda kunotsvaka huni, obva amubata chibharo amuratidza banga kana pfuti.
Mazuvano, kuziva kuti ABUSE iriko hakuna kumisa vanhu kubatwa chibaro mudzimba umu. Zvakatowedzera. Mazuvano chero zvivana zvechikoro zvakasiiwa zviri nherera zvinotoudzwa kuti kana zvichida kupinzwa chikoro ngazvivhure makumbo. Kuziva kuti mwana haana kumwe kwaanokwanisa kuenda chinhu chinoitisa kuti vamwe vakuru vamubate chibharo chisingaudzwi mapurisa. Ndipo patasvika murudzi gwedu asi musafunga kuti kune dzimwe nyika hazviko. Kunyika dzekuEurope zviriko zvakadai asi kungoti isu kare taimbova nounhu.
Mushandi akaenda kumapurisa akavaudza kuti abatwa chibharo namai vemba, ndiye anosungwa. Ari mukadzi akavaudza kuti abatwa chibhario nababa vemba, anoudzwa kuti ndiye abvisa ega bhurugwa. Inyaya isingagadziriki, asi hwisisa kuti ukagumbura munhu anobika mumba mako akagumbuka kusvika pakusava nehanya noupenyu, anokwanisa kukuuraya iwe uchitofunga kuti ndiwe shasha yekubata chibharo.
Chokuita kuti usahurigwa nomunhu ari pamba pako.
Tsvakai mushandi ari pazera risingaiti. Mumba tsvaka munhu akura zvokuti kana mimba haachaiti. Mununguna haaiti kumukumbira kuti azogara pamba achirera vana. Anopedzisira amitiswa nomurume wako.
Pagadheni tsvaka chikomana chine mukaka pamhino kana kuti munhu akurawo chose oda pokungochengetwa achiwana kamari kake. Zvokutsvaka mukomana akagwinya bodo. Zvinoda kana mai vemba vachishandawo basa rokuti havawanzi kuva pamba murume ari kubasa.
Hatisi kuti hakuna vanhu vane vashandi vavasingavati navo, asi kuti kana waziva kuti umwe wako ane meso meso, chirega kumuisa pamuedzo mumba mako chaimo. Kana uchida munhu wekusuka ndiro enda unotenga DISHWASHER, wotengazve WASHING MACHINE, wotenga muchini wekuaina, basa romumba roita nyore.
Mugadheni, kana usingagoni kurima muriwo, ndipo paunotsvaka mudhara asingamiri chombo iota zvemuriwo achingouya kaviri pavhiki. Womupawo muriwo wekunobika kumba kwake.
Toonazve vamwe vanoda kurerekera panyaya iyi ndevava vanofanira kusungiswa kana kuripiswa.
Mukuru pabasa anogarovata nevashandi vake zviri zvokuti usadzingwa basa pasina rudo
Ticha anovata nezvana zvechikoro (should be shot dead)
Mupurisa waSabhuku anovata nemvana dzomuraini.
Headteacher anovata nema NEWLY Qualified Teachers kuti agonyora ma report avo.
Mudhara anobhadhara FEES yenherera/ mwana murombo kuti agowana kuvata nenherera iya
Mupurisa anoudza munhu kuti akavata naye mhoswa haichaendi mberi
Munhu anoda kuvata nomunhu amukumbira LIFT, zvisiri zverudo asi kuti mufambi haana imwe nzira yokufambisa musi uyu.
Kana uchida kuti ndikubatsire nezve PASSPORT APPLICATION yako chimbovata neni
Kana usina kwekuvata uya uvate kumba kwangu asi wondigadzirirawo zvinhu.
Vanhu vakadai dai zvaikwanisika kuti zviitike dai vaingobata zvigwere pese pavanoita utsinye kudai. Kubatsira munhu apinda dambudziko hazvirevi kuti womuwedzera dambudziko nokuda kumurhepa. Kana wafunga kubatsira munhu chiita zvokubatsira. Kana wafunga kunyenga, nyenga muwirirane parudo.
mukomana webasa namai vemba
Musikana webasa nababa vemba
kuvata nagarden boy
kuvata nemukomana wemombe
Posted by Mai E Chibwe at 14:35
Mai Chibwe Please understand my problem. My husband works in South Africa and comes home once in three months.
There is a man aimbotishandira. I asked him kuti azoita mabasa at my house and ndikamboshinga but ndakazorara naye. Now tinorara tese kana auya but mari yake yebasa ndomupa. Iye ane mukadzi wake.
Ndingaita sei? Its lonely without my husband.
Wakaendesa murume ku south kuti tutored vevamwe teve
23 March 2014 at 16:43
Ko yewo murume anoenda kuRSA achisiya mukadi wake ega pamusha anoda kuti nyaya ifambe sei? Vanhu kwanai pamafungire enyu. Kana munhu amboravira chinhu ichi kuti agozogara asina zvinonetsa chero ari murume chero mukadzi. Kana wambojaira zvokungohi chirega zvinonetsa.
Kana murume wako ari kuRSA taura naye uendewoko unotsvaka basa mugare mese. Hakuna umwe mushonga